Qaababka qaadista HIV | Zanzu
Qaababka qaadista HIV
Qof waxa uu ka qaadi karaa HIV dheecaanka jidhka ee qofka hadda ka hor qabay HIV. HIV waxaa la isugu gudbiyaa:
Shahwada qabta, dheecaanka siilka iyo dhiiga ka yimaada muddada dhiiga caadada miduun waxa uu galaa jidhkaaga isagoo maraya xuubka dheecaanka ee futada, dhalfada ee guska, siilka iyo afka.
Dhiiga cudurka qabaa waxa uu dhiigaaga u soo gaadhi karaa si toos ah marka aad wadaagto irbadaha mudditaanka ama dhexda dhiiga la isku shubo. Gudbinta dhexda dhiiga weligeed kama dhacdo Yurub, sababtoo ah dhiiga waxaa laga baadhaa inaanu lahayn HIV.
Ugu dambayn, HIV waxaa la isugu gudbiyaa caanaha naaska marka la naasnuujinayo.
HIV la isuguma gudbiyo candhuufta.
Shahwada qabta, dheecaanka siilka iyo dhiiga ka yimaada muddada dhiiga caadada waxay geli karaan jidhkaaga isagoo maraya xuubka dheecaanka ee futada, dhalfada ee guska, siilka iyo afka.
HIV waxaa la isugu gudbiyaa dhiiga, tusaale, wadaagista irbadaha la isku muddo.
HIV waxaa la isugu gudbiyaa caanaha naaska marka la naasnuujinayo.
Qof waxa uu ku qaadi karaa HIV dhexda galmada iyo dhexda qaababka kale ee gudbinta.
Isku gudbinta galmada dhexdeeda
Dhexda galmada siilka ama galmada futada iyaddoon lahaynkondhom qofka qabta HIV lala sameeyo.
Waxaa jirta mid yar oo ahkhatarta qaadista HIV dhexda galmada afka (haddii shahwada ama dhiiga ka yimid qofka HIV qaba ay gasho afkaaga oo aad leedahay maqaar dilaacsan halkaa).
Dawaynta saxda ah, qofka qaba HIV inta badan ma awoodo inuu gudbiyo HIV marka uu galmo samaynayo kondhom la'aan.
Qaababka gudbinta HIV galmada siilka iyaddoon la isticmaalin kondhom
Qaababka gudbinta HIV: galmada futada iyaddoon la isticmaalin kondhom
Qaababka gudbinta HIV: galmada afka iyaddoon la isticmaalin kondhom.
Isku gudbinta qaababka kale
Hooyada ilaa ilmaha muddada uurka ama ummulida ama marka la naas nuujinayo. Daawaynta saxda ah, haweenka qaba HIV weli waxay dhali karaan carruur caafimaad leh.
Wadaagista irbada mudditaanka ee qofka qaba HIV.
Dhexda dhiig ku shubida. Tani weligeed kama dhacdo Yurub, sababtoo ah dhiiga waxaa laga baadhaa inaanu lahayn HIV.
Qaababka HIV u gudbo: hooyada ilaa ilmaha muddada uurka ama ummulida ama marka la naas nuujinayo
Qaababka HIV u gudbo: wadaagista waxyaabaha la isku muddo
Ma jirto gudbin dhexda xidhiidhka bulshadda
Kama qaadaysid HIV dhexda xidhiidhka bulshadda. Tusaale ahaa: la wadaagista koob ama bilaydha qof, taabashada qof ama dhunkashada ama siinta qof dhunkashada Faransiiska.
Suuragal maaha in la garto haddii qof uu qabo HIV iyaddoo ka eego isaga/ iyada
Ma jiro gudbinta HIV: wadaagista koob ama bilaydh
Ma jiro gudbinta HIV: taabashada ama gacan qaadista
Ma jiro caabuq HIV: is dhunkashada ama siinta dhunkashada Faransiiska
Dadka qaba HIV waxay qaadsiin karaan dadka kale haddii aanay helin daawayn. Dad badan ma garanayaan inay qabaan HIV. Ka ilaali naftaada oo isticmaal kondhomyo muddada galmada.
Mowduuyo badan oo la xidhiidha Qaababka qaadista HIV